Tranga niainana tao anatin'ny andro vitsivitsy | Hevitra MPANOHARIANA
Jentilisa lava loatra ilay izy,ny hevitra lazainy ela poakaty sady lainga daholo,hita hoe olona dondrona be tsy mba nandia fianarana angamba,
Nampidirin'i rakoto @ 22:57, 2009-02-18 [Valio]
Raha ny jerena iaraha-mahita eto, dia ianao no tena olona dondrona tsy nandia fianarana, satria na ny fahalalam-pomba faran'izay kely bitika aza dia tsy anananao sy tsy hainao - ny fifanajana. Rehefa tsy tianao ny soratany dia miala fotsiny ianao fa tsy manambany azy tahak'izao! Mbà menatra!
Nampidirin'i Belle @ 23:15, 2009-02-18 [Valio]
Mankasitraka jentilisa a!
Izaho manokana, na tsy mitovy hevitra aminao aza matetika, dia faly hatrany mamaky ny teny gasy noezahina ho madio izay soratanao. Tena talenta tsara anananao io satria vitsy (mba tsy itenenako hoe : "tsisy") ny mahay manoratra toy izao. Ny gazety soratana manko, efa asa tanan'olona maro (redacteur, corecteur-forme, metteur en page, sns) vao mahatafavoaka ny azy ; fa ny anao dia ianao irery dia mahavita azy.
@ Rakoto : mba manaova raha mahay :).
Nampidirin'i Korio @ 23:45, 2009-02-18 [Valio]
Misaotra anao Jentilisa fa dia tena mahaliana mihintsy ny mamaky ny vaovaonao. Ny tena mampiavaka azy mantsy dia zavatra niainana mihintsy no maro @ lazainao koa afaka manampy tsara izay tsy fenon'ny fampahalalam-baovao.
Mamplahelo ny tanin-tsika e! Ataon'ny mpanao politika fitaovana ny mbola maha bado ny maro @ isika Malagasy. Fampianarana ihany no vahaolana na dia mbola lavitr'ezaka aza izany!!
Misary soa hatrany
Nampidirin'i Eric @ 00:34, 2009-02-19 [Valio]
Avy de vonoy ny hafatra hapetrak'i rakoto io fa hiteny ratsy eto foana no ataony raharaha raha vao tsy mitovy fomba fijery aminy!
Nampidirin'i news2dago @ 09:17, 2009-02-19 [Valio]
Avelao hanao eo fa tsy mankaiza e!
Nampidirin'i jentilisa @ 09:25, 2009-02-19 [Valio]
Zaho koa dia mitovy fijery ireo izay tsy miandany atsy sy aroa, fa ny mba teny tiako ambara de isika malaza ho kristiana nefa maninona no mijaly toy izao?
Ny azoko mba atoro angamba de tsy ny fivavahana eny @ 13 Mai na eny Mahamasina na any Am-piangonana no zava-dehibe fa izao : tokony mivavaka mangina any am-pony ny olona tsirairay tsy atao fantatr' iza na iza fa anao sy Andriamanitra ihany.
Rehefa mba misy fotoana ka mba mahatsiaro ity firenena ity de mivavaka fa tsy voatery na @ fotoana inona na inona.
Mikasika ny fanankianana indray de mahasoa izy ra fanankianana manitsy zvtra fa tsy otran'ny an-Rakoto ity.
za de isany mankasitraka ity Lahatsoratry Jentilisa ity fa ny mba hirariako de ny himparitahan'izy ity ohatran'ny lahatsoratra rehetra na de hoe tsy mitovy fijery aza ny olona rehetra.
Dia mirary soa ho antsika ary enga anie ka Hilamina ity firenentsika ity ary mangataka @ Andriamanitra isika mba omeny saina Hendry ny Mpitarika ny vahoaka na ny Andaniny na ny Ankilany.
Nampidirin'i maisotra @ 11:55, 2009-02-19 [Valio]
Ho an'i "marina izany"
Izaho tsy mitovy hevitra aminao. Efa ela ihany izay nahenoko hoe "mivavala ny gasy, tia anadriamanitra ny gazy,...ndao hivavaka ho an'ny tanindrazana"....
be izay vavaka natao izay fa tsy hita ihany ny vokany. Amiko dia tsotsa ny antony. Mila fahaizamanao sy fampianarana ny Malagasy. Na inona inona vavaka atao dia tsy hahomby satria ny olana dia ny rafitra misy, ny mbola fahabadoan'ny maro an'isa, ary ny tsy fanana-tsika olomanga maro azo safidianan hitarika. Amiko izany ireo olana ireo no tokony ho vahana. Raha tsy voavahy ireo dia ho sasatry ny mivavaka eto isika fa ny omaly tsy miova ihany no eo. Ireo misy ohatra manohana ireo voalazako ireo: Nanao grevy ny rehetra hanesorana an'i Ratsiraka t@ 1991 dia tafaverina izy t@ 1996 (??); Nesorina indray izy t@ 2002 dia napetraka i Ravalomanana, dia izao indray manao grevy ny olona hanala an'i R8. Dia hanao fifidianana indray isika angamba atsy ho atsy. Manahy aho fa na R8 notafaverina eo na i Ratsiraka (na Roland ratsiraka). Raha ireo no miseho dia hahamenatra satria mampanontanin-tena ny vahiny mpitazan hoe "inona ihany aza no tadiavin'ny Malagasy"
Ho fehiny, tsara ny mivavaka fa vavaka tsy arahana asa dia pokaty ihany.
Hevitro ihany no io e!
Nampidirin'i Eric @ 20:08, 2009-02-19 [Valio]
Lava tokoa fa efa saika kivy ihany aho saika tsy hahavaky hatr@ farany. Hono hoa jentilisa ve zany mankeny @ 13 mai foana koa sa mitantara ny ao @ Radio. Ary mbola misy mpiasa miasa ara-dalàna ihany izany any @ biraony tsirairay avy any sa ahoana ny tena fandehany ? Tena mba mampatahotra foana izany isan'andro, misy suspens foana.
Nampidirin'i gasy tsotra2 @ 15:02, 2009-02-20 [Valio]
Tena misy tokoa ny mpiasa miasa ara-dalàna fa ny fanakorontanan fotsiny nomety misy hahazo azy
Nampidirin'i jentilisa @ 21:57, 2009-02-21 [Valio]